राष्ट्रिय समाचार – Online Khabar
#711432 (no title)
सुरक्षित भविष्यको लागि सञ्चय कोष
Guess and Win Terms & Conditions
Super Lite page
१. विजय थापालाई कसले अनसन बसायो ?
२. सुरक्षा माग्दै काठमाडौं आए बम दिदीबहिनी
३. चोभारवासीको पीडा : दिउँसो घरभित्रै नजर बन्द, राति घर छाड्न बाध्य
४. प्रधानमन्त्रीले टुटल र पठाओ नरोक्न भनेपछि व्यवसायीको प्रश्न-ओली नै राज्य हुन् ?
५. माग राख्ने प्रचण्ड, पुरा गर्ने बचन दिने प्रधानमन्त्री ओली
६. ठमेलको डान्सबारमा कुटपिट, २ जना पक्राउ
७. माथिल्लो तामाकोशी उत्कृष्ट दशमा
८. नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने मौका गुमायो
९. वाइडबडीमा ओली, प्रचण्ड र देउवाको सहमति देखियोः लोहनी
१०. संसारकै ठूलो ज्यान भएका रोली नेपाल आउँदै
११. सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने देउवाको चेतावनी
१२. हेलो मुख्यमन्त्री : खोज्दा चर्पी पाइँदैन, के हो स्मार्ट सिटी ?
जोटाको हृयाट्रिकसँगै ओल्भ्सको जित
सुरक्षा माग्दै काठमाडौं आए बम दिदीबहिनी
भोलिदेखि सुर्खेतबाट पनि श्रम स्वीकृति
माग राख्ने प्रचण्ड, पुरा गर्ने बचन दिने प्रधानमन्त्री ओली
मुलपानीमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण कहाँ पुग्यो ?
डा. केसी समर्थकको प्रश्नः सरकार जनताको कि माफियाको ?
५ माघ, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ । माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सहभागीहरुले ‘सरकार जनताको हो कि माफियाको ?’, ‘हिजोको सम्झौता कता गयो ? सरकारको नैतिकता गायव भयो ?’ ‘माफिया मुखी ऐन चाहिँदैन’ जस्तो नारा लेखिएको प्ले कार्ड […]
सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारको उपहारः परिवारका एक सदस्यलाई जागिर
५ माघ, सप्तरी । मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ । ‘बलिदान दिवस’को अवसर पारेर प्रदेश २ सरकारले ४६ सहिद परिवारलाई नियुक्तिको डेमो प्रदान गरेको छ । शनिबार सिरहाको लहानमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्र सरकारका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतसहित प्रदेशका मन्त्रीहरुले शहीद परिवारलाई नियुक्तिको डेमो […]
ठमेलको डान्सबारमा कुटपिट, २ जना पक्राउ
५ माघ, काठमाडौँ । काठमाडौँको ठमेलस्थित डान्सबारमा भएको कुटपिटको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । ललितपुर सातदोबाटो घर भएका ४३ वर्षीय दिलगुरुङ र सुनाकोठी बस्ने ३२ वर्षीय निराजन महर्जनलाई प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ ठमेलबाट पक्राउ गरेको हो । ठमेलस्थित चाहाना डान्सबारभित्र उनीहरुले तारकेश्वर नगरपालिका–६ गोलढुङ्गा बस्ने ३५ वर्षीय मोहन पुरुवाल र काठमाडौँ […]
मर्यादाक्रममा कर्मचारीभन्दा पदाधिकारीलाई तल राखेपछि निर्वाचन आयोगको आपत्ति
५ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारले हालै निर्धारण गरेको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न महानुभावहरूको नयाँ मर्यादाक्रमप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगको शुक्रबारको बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारका कर्मचारीभन्दा धेरै तल राखिनुले संवैधानिक पदको अपमान मात्र हुने नभई समग्रमा संवैधानिक निकायको संस्थागत गरिमा तथा मान–मर्यादामासमेत आँच आउने ठहर गरेको छ । […]
10 १२ घन्टा
शिक्षा सचिवको पीडा : सिकारु विद्यार्थीको अभ्यास
२०४९ साउनदेखि मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापकको रुपमा काम गरेको थिएँ । त्यसअघि पनि सिकाइ सम्बन्धी तीता अनुभवहरु नभएका होइनन् । तर क्याम्पस पढाउन थालेपछि भने यसको तिक्ष्ण अनुभव बढ्दै गयो । अंग्रेजी विषय विभागका प्रमुख देवेन्द्र अधिकारीको आग्रह स्विकार्दै बिहान स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी, दिउँसो नवीन माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक र बेलुकी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्यापन जस्ता […]
10 १३ घन्टा
अपरिचित टेलिफोन नम्बर
रातको एघार बजे प्रतिघण्टा पचास माइलको गतिमा आइरहेको हुरीले रूखहरू ढाल्नेछन्, फूलहरू सबै मार्नेछन् भन्ने महसुस भइरहेको थियो । लिली घर पछाडि गराजतिरबाट लुकेर विस्तारै ढोका उघार्दै घरमा पस्छिन् । उनकी आमा सजना पनि विस्तारै भर्‍याङ ओर्लेर तल झर्छिन् । १५ वर्षकी छोरी यसरी राति ११ बजे त्यो पनि हावाहुरी चलेको बेला लुकीछिपी घरभित्र पस्नुलाई […]
हेटौंडाका पत्रकार मनोहरको हत्या भएको पुष्टि, चार जना पक्राउ
५ माघ, हेटौंडा । हेटौंडा–१, भैरवडाँडामा १० दिनअघि शंकास्पद रुपमा मृत्यु भएका पत्रकार मनोहर ढकालको हत्या भएको पुष्टि भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरले घटनाको १० दिनपछि ढकालको हत्या भएको सार्वजनिक गरेको हो । २५ पुसमा मारिएका ढकालको हत्यामा संलग्न चार जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न हेटौंडा–११ का १९ […]
अनि भयो नेपाली महिला क्रिकेटको उदय
१ असार २०६१ । ‘केटीले पनि क्रिकेट खेल्ने ? मैले त देखेको छैन,’ शान्तिले आश्चर्यभाव प्रकट गरिरहँदा एकपटक मेरो मथिङ्गल घुम्यो । दिमागमा कुनै नयाँ कुराको बीजारोपण हुँदा मैले पहिलो सेयर गर्ने भनेकै जीवनसाथीलाई हो । नयाँ निर्णय लिनुअघि उनैसँग सल्लाह गर्छु । सम्भावना, चुनौती र जोखिमबारे हामी धेरै कोणबाट कुरा गर्छौं । जीवनसाथीको अर्थ […]
५ माघ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा भएको देखिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा भएको देखा परेको उनको दाबी छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी -राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष समेत रहेका लोहनीले भने, ‘यो […]
नागरिक लगानी कोषका मुख्य व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा आगलागी, हेर्नुस् ८ तस्वीर
५ माघ, काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित नागरिक लगानी कोषको कार्यालयमा आगलागी भएको छ । शनिबार दिउँसो कोषका मुख्य व्यवस्थापक शुशिलकुमार अर्यालको कार्यकक्षमा आगलागी भएको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरका प्रमुख डीएसपी गोविन्दराज काफ्लेका अनुसार घटना भएको एक घन्टामै आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । ‘आगलागी भएलगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली आगोलाई नियन्त्रणमा ल्याउन […]
10 १४ घन्टा
५ माघ, पोखरा । लेकसाइड क्षेत्रमा पुस्तकालय त टाढाको कुरा खोजेका बेला चर्पी पाइँदैन । साँझ पर्न पाएको हुँदैन प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले ओई रोक्, तँ कहाँ जान लागेको भन्दै हप्काउँछन् । व्यापारी कतिबेला ग्राहक आउँछन् भनेर जाल थापेर बस्छन् । मुख्यमन्त्रीज्यू, यो कस्तो संस्कार भएको पर्यटकीय नगरी हो ? लेकसाइडबाट एक व्यक्तिले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा […]
विदेशमा लगानी गर्नेहरुमाथि छानविन हुन्छः प्रधानमन्त्री
४ माघ, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा लगानी गर्ने नेपालीहरुबारे छानविन गर्ने भएको छ । हालै सञ्चार माध्यममा आएको खबरहरुलाई सरकारले गम्भीतापूवर्क लिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन् । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके)ले आईसीआईजेसँग मिलेर हालै सार्वजनिक गरेको नेपालिक्समा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था विपरित ५५ नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको भेटिएको दाबी गरिएको […]
डा. केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन नहुने प्रधानमन्त्रीको संकेत
४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आमरण आनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रष्ट संकेत दिएका छन् । त्यसका लागि उनले संसदको सर्वोच्चताको सहारा लिएका छन् । आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै डा. केसी इलाममा अनसन बसेका थिए तर, स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि रातारात हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको छ । […]
सेमिफाइनलमा नेपालले इन्डोनेसियासँग खेल्दै
४ माघ, काठमाडौं । थाइल्यान्ड महिला टी–ट्वान्टी स्माश क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा आज नेपालले इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि इन्डोनेसियासँग टर्डथाइ क्रिकेट मैदानमा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ बजेर १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । समूह ‘ए’बाट नेपालले एक खेल पनि नहारी चारै खेलमा शतप्रतिशत जितसहित सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको टिम हो । यता, इन्डोनेसियाले भने […]
10 २ दिन
बार्सिलोना कोपा डेल रे को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश
४ माघ, काठमाडौं । बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार भएको दोस्रो लेगमा घरेलु टोली बार्सिलोनाले लेभान्टेलाई ३–० गोलले पराजित गर्दै समग्रमा ४–२ गोलअन्तरको जित निकालेर क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । बार्सिलोनाले यसअघिको पहिलो लेगमा भने २–१ गोलअन्तरको हार ब्यहोरेको थियो । नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा बार्सिलोनाको जितमा औस्माने […]
३ माघ, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि राति नै काठमाडौं ल्याइएको छ । डा. केसी ९ दिनदेखि इलाममा अनसनरत थिए । तर, बिहीबार साँझबाट उनको मुटुको चाल अस्थिर भएपछि चिकित्सकहरुले कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै तत्काल काठमाडौं लैजान सुझाव दिएका थिए । रात परिसकेकाले इलाममा हेलिकोप्टर ल्याण्ड […]
सुन तस्करी प्रकरण : एसएसपी श्याम खत्री छुटेनन्
३ माघ, विराटनगर । उच्च अदालत, विराटनगरले करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका विवादास्पद एसएसपी श्यामबहादु खत्रीलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ । बिहीबार उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल र न्यायाधीश जनक पाण्डेको इजलासले विवादास्पद एसएसपी श्यामबहादुर खत्री र नेपाल एयरलायन्सका कर्मचारी अमरमान डंगोललाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो । विवादास्पद छविका खत्रीले […]
कांग्रेसलाई सरकारको जवाफः मनको बाघले कति खान्छ ?
३ माघ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेको अस्पताल खारेज गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘हस्पिटलहरुको नाम खारेज… यो मनको बाघले कति खान्छ ? वनमा त बाघ छैन’, उनले भने । उनले अघि […]
निर्णय उल्ट्याउँदै गए यो सरकार पनि उल्टिन्छ : खाँण
३ माघ, बुटवल । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांणले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याउँदै जाने हो भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि छिटै उल्टिने चेतावनी दिएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्ष पुगेका र क्यान्सर,मिर्गौला,कलेजो जस्ता असाध्य रोगका विरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने भनी गरेको निर्णय उल्ट्याकोप्रति आक्रोश पोख्दै […]
बुटवल र दैलेख क्षेत्रमा तेल र ग्यास अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई
३ माघ, काठमाडौं । चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिन बनेको परियोजनालाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । चैत ०७२ मै यससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा बनाएको कार्यायोजनासहितको परियोजनालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो । अब नेपाल र चीनको खानी विभाग स्तरबाट […]
‘विमानस्थलमा वाल पेपर च्यातिन्छ, ट्वाइलेट पेपर चोरिन्छ’
३ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले नियमित बजेट खर्चिएर अस्तव्यस्त बनेको एयरपोर्टलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिरहेको छ । तर, सुधारका लागि राखिएका तथा सजाइएका वस्तुहरु बिगार्ने, च्यात्ने र जथाभावी फोहोर गरिदिने लगायतका समस्याले विमानस्थल प्रशासन हैरान भएको छ । विमानस्थललाई सुधार गर्न सरकारले प्रयास थालेको लामो समय भएको छैन । सुधारका लागि ‘बुटिक एयरपोर्ट’ […]
123 … 3,267 >>